बाइकको आत्मकथा ! – Click Khabar
बाइकको आत्मकथा !
सर्वश्रेष्ठ भइपल्टेको मान्छे यी बोल्नै नसक्ने बिचाराहरूलाई बली दिएर भगवानसँग के माग्छन् होला?, आफूले चाहेको काम आफैं गर्न नसकेर भगवानलाई अरूको ज्यान ‘घुस’ दिने मान्छे कसरी सर्वश्रेष्ठ भयो? कि भगवानले पनि मान्छेका काम मिलाएर गर्ने गर्छन्?
मन्दिरबाट फर्केर उसले मलाई आफ्नो अफिस लियो। सबैलाई प्रसाद र लड्डु खुवायो। उसका साथीहरू मलाई हेर्न आए। कतिले ‘चाबी दे न एकछिन चलाउँछु’ भने। उसले टारिदियो।
ऊ मलाई जहाँ पायो त्यहाँ लिँदैनथ्यो। कसैले ‘एकछिन चलाउँछु दे न’ भन्दा उसलाई कलेजो नै मागेजस्तो लाग्थ्यो। आफूलाई यति धेरै केयर गर्ने मालिक देखेर म दंग पर्थें- खप्पर त मेरो इन्जिनभन्दा पनि बलियो छ कि क्या हो कस्तो ज्ञानीध्यानी मान्छे छ!
‘घरको सिँढी उक्लिनेबाहेक यो कहिँ एक पाइला हिँड्दैन। मिल्ने भए मलाई सिरानीमै लिएर राख्थ्यो होला। कहिलेकाहीँ त दिक्कै लाग्छ भन्या,’ ऊ मालिकको कुरा काट्थ्यो,’छोडेर जान पनि नमिल्ने किस्ता तिर्नै बाँकी छ।’
‘जिब्राक्रसमा पैदलयात्री आए रोक्नुपर्छ। लेन मिच्नु हुन्न। सेतो सिधा रेखा भएको बाटोमा ओभरटेक गर्नुहुन्न। सेता रेखा दुइटा छन् भने त्यो डबल पर्खाल लगाएजस्तै हो। फोनमा कुरा गर्दै मोटरसाइकल चलाउनु हुन्न।’
‘म त यार आफ्ना मालिकका गर्लफ्रेन्ड देखेर हैरान छु। आज एउटी आउँछ भोलि अर्कै,’ पल्सर रोमान्टिक कुरा सुनाउँथ्यो।
‘बुलेट दाजु, सोरूमबाट निस्केको भर्खरै हो कि क्या हो,’ मैले सोधें।
‘होइन हो भाइ चारपाँच वर्ष भइसक्यो। बुढो भइयो नि अब त,’ उसले भन्यो।
‘अनि यति सफाचट हुनुहुन्छ त?’
‘त्यो त मालिक हेरेर हुन्छ नि भाइ। तिमीहरूलाई थाहै छैन, मालिकको क्लास हुन्छ क्या। मेरो मालिकले मलाई दिनदिनै धुने मान्छे राखेको छ। तिमीहरूकाले सक्दैनन्।’
‘क्लासस्लासको त के कुरा भयो र बुलेट दाजु, कोहीकोहीका मालिक त हेलिकप्टर नि चढ्छन्। राम्ररी चलाउने मान्छे भए पुगिहाल्यो हामीलाई,’ मैले भन्दिएँ। जेसुकै भए पनि आफ्नो मालिकलाई तल पारेको त कसैलाई चित्त बुझ्दैन नि होइन।
‘यो जुनी त मेरो बितिनै हाल्यो तिम्री आमाको सरापले अर्को जुनी फेरि बाइक हुन नपरोस्। गेट वेल सुन डियर मालिक!’
तरुण दलले प्रदर्शन गर्ने
बेदान्त मल्टिप्रपोज कम्पिनिमा तोडफोड
२०७७, १७ बैशाख बुधबार0
गरिमा धानको २० प्रतिशत राहत स्थानीय तहमा आयो
२०७७, २२ बैशाख सोमबार0